Department of Historical Research,Myanmar
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စာအုပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်း ==================================== ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ပတ်သက်၍ မွေးဖွားခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ကျဆုံးသည့်အချိန်အထိတိုင် ကလေးဘ၀ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားဘ၀ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ၊ သခင်ဘဝ၊ လွတ်လပ် ရေး ကြိုးပမ်းမှုကာလ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးသမားဘဝ၊ တပ်မတော်သားဘဝနှင့် ဖဆပလခေတ် နိုင်ငံရေး ကြိုးပမ်းမှု ဘဝများကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရဟန်းရှင်လူ ပညာရှိများ ရေးသားထား ခဲ့သည်မှာ အများအပြားပင် ရှိပါသည်။ ထိုမျှမက လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုကာလ တလျှောက် ပြောကြား ခဲ့သော မိန့်ခွန်းများမှာလည်း များပြားလှပါသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့ဆက်၍လည်း အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်း အရာများကို မိမိတို့ ဖော်ပြလိုသော အဓိက အကြောင်းအရာကို စောင်းပေး၍ ရေးသားပြုစု ထုတ်ဝေကြဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့မှ ပညာရှင်ကြီးများက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ငယ်ဘဝမှသည် ကျဆုံးရချိန်အထိ ဖြစ်ပျက်တွေ့ကြုံခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များကို အသက်အပိုင်းအခြား လိုက် ခေတ်အပိုင်း အခြားအလိုက် ခွဲခြား၍ တာဝန်ယူကာ အဂတိကင်းစွာ သုတေသနပြုစု ရေးသားခဲ့ကြ ပါသည်။ ခေတ်ပြိုင် အထောက်အထားမှတ်တမ်းများကိုသာမက ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်သော သက်ရှိထင်ရှားလည်း ရှိနေသေးသော သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း၍ ရရှိသော အချက်အလက်များကို ကိုးကား အသုံးပြု၍လည်း ရေးသားပြုစုခဲ့ကြပါသည်။ အခါခါ ပြန်ဖတ်၊ အခါခါ ဖြည့်စွက်၊ အခါခါ ပြုပြင်၍ ရေးသား ပြီးခဲ့သော စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံဆုံး အကောင်းဆုံးဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကား အတော်အတန်ပြည့်စုံသော စာအုပ်ဖြစ်ပြီဟူ၍ကား ဆိုနိုင်ပါ သည်။ သို့ပါ၍ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုပြီး စာဖတ်သူ ရဟန်းရှင်လူတို့အား လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရှင်သုတေသီအပေါင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြပါဟု ပြောလိုပါသည်။ မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် သမိုင်းပညာရှင်ကြီးများ ရေးသားပြုစုပြီး စာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် သမိုင်းသုတေသနဌာနမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်ဟု မှတ်ယူရပါသည်။ ထိုမျှမက မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်း ကို လေ့လာသုတေသနပြုစုသူများ မလွဲမသွေ ဖတ်မှတ်ရမည့် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက် ပါသည်။ စာအုပ်ကို သမိုင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃၅) ၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၈၃၈၄၊ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(နေပြည်တော်)၊ ကုမုဒြာကြားပန်းဝိုင်းအနီး၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၁၈၄၂၆ နှင့် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်း၊ အမျိုးသားပြတိုက်ရှိ သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာန၊ ဖုန်း ၀၁-၃၉၅၁၉၀၊ ၃၉၅၁၉၂ တို့တွင် တန်းဖိုးငွေကျပ် ၇ဝဝဝိ/- ဖြင့် ဖြန့်ချိသည်။
မြန်မာ့သမိုင်း၏ လားရာအတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်” သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် စာတမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ××××××××××××××××××××××××××××××××××
မြန်မာ့သမိုင်း၏ လားရာအတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်” သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက် စာတမ်းများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ×××××××××××××××××××××××××××××××××× နေပြည်တော် ၂၃ နို သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သမိုင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနသည် သမိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများကို ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ သမိုင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပိုမိုပြည့်စုံမှန်ကန်လာစေရေး၊ သမိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆ၊ အတွေး အခေါ်များ ပြည်သူလူထုများအကြား ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသိမြင်လာစေရေး ရည်ရွယ်၍ "မြန်မာ့ သမိုင်း၏ လားရာအတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ဒုတိယပတ်အတွင်း အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်(ရန်ကုန်)၌ ကျင်းပပြုလုပ် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အဆိုပါ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ပါဝင်ဖတ်ကြားလိုသည့် စာတမ်းရှင်များ အား စာတမ်းများပေးပို့နိုင်ကြောင်း ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ စာတမ်းဖတ်ကြားလိုသော စာတမ်းရှင်များအနေဖြင့် စာတမ်းအကျဉ်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမပတ်တွင် နောက်ဆုံးထား၍လည်းကောင်း၊ စာတမ်းအပြည့်အစုံကို Hard Copy / Soft Copy များဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၅)ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံးထား၍လည်းကောင်း သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်/ ရန်ကုန်)ရှိ အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာများသို့ ဆက်သွယ်၍ အချိန်မီပေးပို့နိုင်ပါကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန သမိုင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၃၅)၊ နေပြည်တော် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ် - ၀၆၇-၃၄၀၈၃၈၄ ၀၉-၂၅၀၇၀၀၄၈၀ ၀၉-၂၅၄၀၇၅၅၅၈ သမိုင်းသုတေသနဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ) အမှတ် - ၈၅(A)၊ သီရိမင်္ဂလာရိပ်သာလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁- ၆၅၈၁၅၂ ၀၉-၄၂၀၀၀၆၁၆၁ ၀၉-၄၂၀၇၀၀၈၆၄ ၀၉-၄၃၀၃၁၂၈၀ ၀၉-၉၇၇၂၆၂၇၃၄
Announcement for the cancellation of the “Learning from the Past, Mapping the Present, and Charting the Future: An International Conference on Myanmar Studies” It is with the deepest regret that we must announce the cancellation of “Learning from the Past, Mapping the Present, and Charting the Future: An International Conference on Myanmar Studies” scheduled for August 2020, in light of the recent circumstances concerning the outbreak of Coronavirus disease 2019 (COVID -19) in Myanmar and around the world. The Myanmar Historical Commission and the Department of Historical Research and National Library, after much deliberation, have concluded that organizing the international conference during this time of uncertainties and difficulties would be inopportune and may result in inconvenience for the international scholars and paper presenters due to unpredictable circumstances concerning travel and entry into Myanmar. Hence, it has been decided that “Learning from the Past, Mapping the Present, and Charting the Future: An International Conference on Myanmar Studies”scheduled for August 2020 shall be cancelled. Although this year’s international conference has been cancelled, the Department of Historical Research and National Library remains committed to our departmental goal of organizing international conference dedicated to Myanmar studies annually and will proceed to organize future events in coming years, once the current incident has subsided.
Contact to: dhr.int.conference@gmail.com Mr. Swam Pyae Research Officer Department of Historical Research and National Library, Myanmar Email: pyaeswam9@gmail.com Ph: +959795137718
Ms. Thandar Aung Research Officer Department of Historical Research and National Library, Myanmar Email: thandarmgbo1984@gmail.com Ph: +959977262734
(1) U HTun Pe (1952-53)
(2) U Win (1953-55)
(3) U Htun Tin (1956-57)
(4) U Ba Saw (1957-58)-(1960-62)
(5) Tha Khin Tin (1958)
(6) U Thein Mg (1958-59)
(7) U Lon Baw (1959-60)
(8) U ChitThaung (1958-59)
(9) Col. Saw Myint (1962-74)
(10) Bragiter Thaung Dan (1962-74)
(11) U A ye Maung (1974-78)
(12) U Mya Maung (1978-1980)
(13) Man San Myat Shwe (1981-1985 )
(14) U Aung Kyaw Myint ( 1985 -1998)
(15) Lt.General Phone Myint (1988-92)
(16) Lt.General Aung Ye Kyaw (1992-1995)
(17) Bragider Thaung Myint (1995-96)
(18) U Aung San (1996-97)
(19) U Win Sein (1997-2001)
(20) U Tin Win (2001-2002)
(21) General Kyi Aung (2002-2006)
(22)General Khin Aung Myint-(2006 – 2011)
(23) U Kyaw San 2011 – 2012
(24) UAye Myint Kyu 2012-2016
(25) Thu Ra U Aung Ko